မိဘမဲ့ကလေးများအတွက်လိုအပ်သောစောင့်ရှောက်မှုများနှင့်အစားအစာများ Dogs World
ယေဘုယျအားဖြင့်အမျိုးသမီးခွေးများသည်၎င်းတို့၏ခွေးပေါက်စများကိုမွေးဖွားသောအခါသူတို့၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးသည်။ သို့သော်ဖြစ်ရပ်များစွာရှိသည် ဖြစ်ခြင်း လူ့သူတို့ရဲ့ကြီးပြင်းမှုအတွက်တာဝန်ရှိဖြစ်ခြင်းတက်အဆုံးသတ်ထားသည်.
ဒီလုပ်ငန်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့မှာအရေးကြီးတဲ့အရာဖြစ်တယ် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တစ် ဦး ထံမှအကူအညီ, ဒီအဆင့်မှာခွေးပေါက်စများသောအားဖြင့်အတော်လေးနူးညံ့သိမ်မွေ့သောဖြစ်ကြ၏, အထူးသဖြင့်ဘဝ၏ပထမ ဦး ဆုံးရက်သတ္တပတ်၌တည်၏။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်မိဘမဲ့များဖြစ်သည့်အခါခွေးပေါက်စများလိုအပ်သည့်စောင့်ရှောက်မှုတစ်ခုစီကိုသိရှိရန်လိုအပ်သည့်အချက်အလက်အားလုံးကိုယူဆောင်လာရသည်။
များစွာသောကိစ္စရပ်များတွင်ခွေးများကိုအချို့သောဝေဒနာများခံစားနေရသောကြောင့်စွန့်ပစ်သည် အနာ, ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ la အမှိုက်သရိုက်များလွန်းသည် သို့မဟုတ်လျော့နည်းဘုံကိစ္စများတွင် မိခင်၏ငြင်းပယ်မှု။ ခွေးတစ်ကောင်သည်မိဘမဲ့ခွေးကလေးများကိုမွေးစားခြင်းမှာသူတို့ကိုယ်သူတို့မွေးဖွားခြင်းမရှိသည်ဖြစ်စေမည်သို့ပင်ဆိုစေ၎င်းသည်အခြားတစ်ဖက်၌ဖြစ်ပျက်နိုင်သည့်အရာဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့လည်းဖော်ပြနိုင်သည်။
လူတစ် ဦး အတွက်ဝမ်းနည်းစရာများစွာဖြစ်စေသည့်အရာမှာမည်သည့်မျိုးစိတ်ကိုပင်စွန့်ပစ်ထားသည့်ခွေးပေါက်စများကိုရှာဖွေခြင်းဖြစ်သည်။
အကယ်၍ ၎င်းတို့သည်အနည်းဆုံးသူတို့၏ပထမဆုံး ၂၄ နာရီဘဝအတွက်မိခင်နို့အနည်းငယ်သောက်သုံးရန်လုံလောက်သောကံကောင်းခဲ့ကြပါက ၄ င်းနည်းအားဖြင့်သူတို့သည် colostrum ကိုအကာအကွယ်ပေးသောပantibိပစ္စည်းများဖြင့်စားသုံးကြလိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်သူတို့၏ရှင်သန်ရပ်တည်ရေးအခွင့်အလမ်းများတိုးလာလိမ့်မည်။
ခွေးကလေးလိုအပ်သောစောင့်ရှောက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ တိရိစ္ဆာန်ဆရာဝန်များကကျွန်ုပ်တို့အားလမ်းညွှန်ပေးနိုင်သည် ၎င်းသည်ဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်ရန်မိဘမဲ့ဖြစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည် - ဥပမာအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အားသင့်လျော်သောနို့ပမာဏ၏ညွှန်ကြားချက်များနှင့်ကြားကာလများနှင့်ခွေးများကိုတစ်ပတ်လျှင်ကိုယ်အလေးချိန်တိုးရန်လိုအပ်သောညွှန်ကိန်းများပေးခြင်း၊ အရာရာတိုင်းမှန်ကန်စွာလည်ပတ်ရန်ဖြစ်သည်။
ဘ ၀ ၏ပထမအပတ်များတွင်ခွေးတစ်ကောင်သည်အိမ်တွင်အပူချိန်အမြင့်ဆုံးဖြစ်သော်လည်းခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ကိုထိန်းသိမ်းရန်လိုအပ်သောစွမ်းရည်မရှိပါ။ စောင်တစ်လုံးသို့မဟုတ်လက်သုတ်ပုဝါပါသည့်သေတ္တာလေးတစ်လုံးရှိရန်လိုအပ်သည်။ လုံခြုံအပူအရင်းအမြစ်နေရာနိုင်ရန်အတွက်.
ခွေးပေါက်စများများရှိရင်၊ အတူတူဖြစ်ခြင်းအားဖြင့်သူတို့အနည်းငယ်အပူကိုထိန်းသိမ်းနိုင်ပါလိမ့်မည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်လည်းကျွန်ုပ်တို့ကိုကူညီနိုင်သောအခြားအရာတစ်ခုမှာအရုပ်ကိုကစားစရာနေရာချထားခြင်းဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ခွေးတစ်ကောင်အားကျွေးမွေးသင့်သည့်နို့နှင့် ပတ်သက်၍ အိမ်လုပ်ဖော်မြူလာအချို့ကိုတွေ့နိုင်သည်၊ သို့သော်ယင်းကိုအကြံပြုသည် နွားတွေကလာတဲ့နို့ကိုရှောင်ကြစို့.
အခြားတစ်ဖက်တွင်, အူအတွင်းပြproblemsနာများရှိနေခြင်းကိုရှောင်ရှားရန် Lactose ကိုမပါဝင်သောတသုံးပါ။ သို့သျောလညျး, ငါတို့သည်လည်းစျေးကွက်ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည် ခွေးများအတွက်အထူးနို့.
ငါတို့နို့ကို Bain-Marie နဲ့အပူပေးပါလိမ့်မယ် ခန်ဓာကိုယ်အပူချိန် ၃၈ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်ရှိသည့်အချိန်အထိကျွန်ုပ်တို့စစ်ဆေးမည်၊ လက်ကောက်ဝတ်၏ထိပ်တွင်တစ်စက်ချထားသည်။
ခွေးပေါက်စများနို့စို့နည်းကိုကျွန်ုပ်တို့လေးစားရန်လိုသည်ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်သူတို့ကိုဝမ်းဗိုက်၏ထိပ်ပေါ်တွင်အမြီးထက်အနည်းငယ်ပိုမိုမြင့်မားစွာတင်ထားရန်လိုအပ်သည်။ ၄ င်းတို့ကိုမွန်းကျပ်ခြင်းမှကာကွယ်ရန်မည်သည့်အချိန်တွင်မှ၎င်းတို့ကျောပေါ်တွင်နေရာချရန်မလိုအပ်ပါ။
အဲဒါပိုကောင်းတယ် ပထမ ဦး ဆုံးအနေဖြင့်ခွေးပေါက်စများကိုနို့အနည်းငယ်ပေးပါတစ်နေ့လျှင် ၈ ကြိမ်ခန့်၊ ဤနည်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အစာခြေရောဂါများမဖြစ်စေရန်တားဆီးလိမ့်မည်။
ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာတွင်သူတို့ကိုအချို့ပေးရမည့်အချိန်ရောက်လာပြီ အစိုင်အခဲအစာအထူးတိရိစ္ဆာန်သို့မဟုတ်တိရိစ္ဆာန်ဆရာမှညွှန်ပြထားသောအခြားမည်သည့်အစားအစာဖြစ်သနည်း။ ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတို့သောက်သည့်အချိန်တွင်နို့နှင့်အတူစမ်းသပ်ပြီးပန်းကန်မှတစ် ဦး တည်းအစာစားရမည်။
ခွေးတစ်ကောင်၏အသက်တာသည်၎င်း၏ပထမ ဦး ဆုံးဘဝအသက်တာတွင်မိခင်နို့ကမ်းလှမ်းသော colostrum ကိုစားသုံးရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။။ ပထမတစ်ဆယ့်နှစ်နာရီကုန်လွန်သွားပြီးနောက်အထက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ရှင်းပြခဲ့သည့်နည်းကို သုံး၍ သူတို့ကိုကျွေးမွေးနိုင်သည်။
ခွေးပေါက်စများသည်အစားအစာမျှသာမဟုတ်ပါ။ သင့်အားကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းရန်အကြံပြုပါသည် အကောင်းဆုံးအခြေအနေများနှင့်အတူပတ်ဝန်းကျင်, တစ် ဦး အပျနှံပါဝင်သည်ရှိရာ၎င်း၏ပထမ ဦး ဆုံးနေ့ရက်ကာလ၌အချိန်ပြည့်, ငါတို့ညအချိန်၌ပင်ပုံမှန်တစ်ပုလင်းနှင့်အတူအစာကျွေးဖို့ရှိသည်သော။
အလားတူပင် မိခင်ရဲ့နှုတ်ခမ်းတွေကိုတုပရမယ်။ သင်၏မျက်နှာနှင့်ခန္ဓာကိုယ်၏ကျန်အစိတ်အပိုင်းများကိုအခါအားလျှော်စွာအထည်ဖြင့်သန့်ရှင်းခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ရေပူဖြင့်စိုစွတ်ရမည်။
အဲဒါကိုကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းသတိရနေရမယ် ခွေးပေါက်စများမှာစွမ်းရည်မရှိပါ အူသိမ်သည်ဆီးသွားနိုင်ခြင်း (သို့) သင်၏အူသိမ်အူမသည်လှုပ်ရှားမှုအချို့ကိုမိမိဘာသာပြုလုပ်နိုင်ခြင်းဤလုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုစီကိုဖြည့်ဆည်းရန်လိုအပ်သောကြွက်သားဖွံ့ဖြိုးမှုမရှိသေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဤအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်သည် အဆိုပါခွေးကလေးတစ် ဦး နှိုးလိုအပ်သည်အမေကလျက်နေခြင်း၊ ဒါမှမဟုတ်စအိုareaရိယာကိုညင်ညင်သာသာပွတ်သပ်ပြီးလိင်အင်္ဂါareaရိယာကဲ့သို့နူးညံ့စွာပွတ်တိုက်သင့်သည့်စိုစွတ်သောချည်အနည်းငယ်အသုံးပြုခြင်းကဲ့သို့သောလက်စွဲနည်းလမ်းကိုအသုံးပြုသည်ဖြစ်စေ။
ကျနော်တို့ 21 ခန့်သည်အထိဒီအတုဆွလုပ်ဖို့ရှိသည် ရက်ပေါင်းဤအချိန်ပြီးနောက်ခွေးပေါက်စများသည်၎င်းတို့၏လိုအပ်ချက်များကိုထိန်းချုပ်ရန်လိုအပ်သောစွမ်းရည်ရှိသည်။
၎င်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့အထက်တွင်ရှင်းပြခဲ့သော option အပြင်ကျွန်ုပ်တို့ကို၎င်းကိုအခြားသူများနှင့်ဖြည့်နိုင်သည် အပူပေးသောဒြပ်စင်ဥပမာမီးအိမ်၊ ရေနည်းနည်းရှိသောအိတ်တစ်ခု၊ အပူစောင်သို့မဟုတ်ကြမ်းပြင်ပေါ်တွင် insulator တွင်လည်းထားပါ။
ကျနော်တို့ခွေးကလေးထားရှိသည့်ပတ်ဝန်းကျင်အလွန်ခြောက်သွေ့သောအခါ ငါတို့သည်အနည်းငယ်အပိုဆောင်းအစိုဓာတ်ကိုထည့်ထားနိုင်ပါတယ်။ ထိပ်ခေါင်နှင့်ခွေးနေရာချထားသောနေရာတစ်ဖက်ရှိစိုစွတ်သောစောင်သည်အဖြေကောင်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။
ရှာတွေ့ကလေးငယ်များအတွက် မိသားစုဝင်များနှင့်မှန်ကန်စွာဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်လိုအပ်သည်, ဘဝ၏ပထမငါးသို့မဟုတ်ခြောက်ပတ်ကနေ။
၄ င်းတို့သည်ခွေးပေါက်စများဖြစ်ကြောင်းစိတ်စွဲမှတ်ထားရမည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းတို့အားဆူညံသံ၊ လှုပ်ရှားမှု၊ လူနှင့်အခြားအိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ဂရုပြုရန်လိုအပ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခွေးကမ္ဘာကြီး » အထွေထွေခွေးများ » ခွေးများ » မိဘမဲ့ကလေးများကိုစောင့်ရှောက်ရန်